Dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay magaalada Mandhera – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
29th December 2015 MAREEG Af Soomaali 0
Dibadbaxyo rabshado wata ayaa lagu soo waramayaa iney maanta ka billowdeen magaalada Mandera ee gobolka waqooyi-bari Kenya, kaddib markii ciidanka milateriga Kenya ay rasaas oodda uga qaadeen dad saarnaa gaari shibil ah, iyagoo dilay labo qof, shan kalena dhaawacay.
Dibadbaxayaasha ayaa socod ku maray qaar ka mid ah wadooyinka magaaladaasi iyagoo ku qeylinayay hadallo ka dhanka falka ay ciidamada Kenya ku dileen dadka rayidka ah.
Saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in dadka la dilay looga shakiyay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab, balse waxaa hadalkaasi beeniyay guddoomiyaha degmadaasi Cali Roba, oo sheegay in dhibbanayaasha ay ahaayeen rakaab caadi ah, isla markaana aanay jirin wax caddayn ah oo la xiriira inay walxo qarxa ku wateen gaariga.
Gudoomoyaha degmada Mandheera Cali Roba ayaa sheegay inuu tagay goobta falku ka dhacay, wuxuuna sheegay inuusan walxo qarxa ku arkin gaariga, isagoo ciidamada ku eedeeyay iney si ula kac ah u dileen dadkaasi rayidka ah.
Milateriga Kenya ayaa sheegay gaarigaasi ay saarnaayeen walxo qarxa balse dadweynaha eer Mandheera oo dareenkooda ku muujiyay dibadbaxaasi ayaa si kulul u beeniyay halka ka soo yeeray booliiska Kenya.
Xog: Maxay tahay sababta uu Axmed Madoobe Markale u dalbaday in loo kordhiyo waqtiga u Kusoo magacaabaayo Golaha wasiirada.